Monday, 02 August 2010 04:59	नागरिक
दिलीप पौडेल, बाग्लुङ, साउन १७- अमेरिकामा अध्ययनरत बाग्लुङका एक विद्यार्थीले त्यहाँको मेइन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। चार वर्षअघि अध्ययनका लागि अमेरिका पुगेका बाग्लुङ नगरपालिका-३, गुठीका सुशील खड्काले विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त अवार्ड पाएका हुन् ।
सन् २०१० मा इन्जिनियरीङतर्फ स्नातक तहमा अध्ययनरत विश्वविद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई उछिन्दै खड्का उत्कृष्ट भएका छन्। विश्वविद्यालयले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयमा विश्वभरका १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
उनले पेन्त्रि्कयाटिक क्यान्सर छुट्टयाउन प्रयोग हुने सुन तथा चाँदीका सुक्ष्म कणको प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान र शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट स्थान ल्याएबापत उक्त पुरस्कार पाएका हुन्। ‘मेरो प्राज्ञिक क्षमता, नेतृत्वदायी भूमिका र अनुसन्धानको मूल्यांकन गर्दै विश्वविद्यालयले सम्मान गरेको छ,' खड्काले टेलिफोनमा भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत नभएर नेपालकै सम्मान भन्ने ठानेको छु।'
विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उक्त अवार्ड सन् २००९ मा फ्रान्सका विद्यार्थीले पाएका थिए। खड्काले अमेरिकाको पल्प एन्ड पेपर फाउन्डेसनबाट छात्रवृत्तिसमेत पाएका छन्। उनी फाउन्डेसनबाट वार्षिक १५ हजार डलरको छात्रवृत्ति पाउने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुन्।
विश्वविद्यालयका रासायनिक तथा जैविक इन्जिनियरिङका प्राध्यापक माइकल मेसनसँगको सहलेखनमा दुई पुस्तकसमेत प्रकाशन गरेको उनले बताए। म्याग्दीको बरंगजामा जन्मेका खड्काले कक्षा ८ सम्म गाउँकै सरकारी स्कुल तथा कक्षा ९ देखि बाग्लुङको अमृत आदर्श उच्चमाविमा अध्ययन गरेका थिए। चितवनबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण उनले काठमाडौंको निक उच्चमावि डिल्लीबजारबाट ‘प्लस टु' उत्तीर्ण गरेका थिए।
अमेरिकामा छोराले पाएको सम्मानप्रति बाबु केशवले खुसी प्रकट गरे। भूपू भारतीय सैनिक उनले भने, ‘मैले सोचेकोथिइनँ, सुखद खबरले खुसीको सिमा छैन।'
पाँच दिदीका कान्छा भाइ सुशील स्कुल देखि नै मेधावी थिए। अमृत आदर्श उच्च माविका प्रिन्सिपल महेशचन्द्र प्रधानले उनको तारिफ गरे। ‘निकै लगनशील र जिज्ञासु थियो,' दार्जिलिङ भ्रमणको स्मरण गर्दै प्रधानले भने, ‘त्यसबेला उसलाई यात्राको रिपोर्टिङको जिम्मा दिएको थिएँ, उसले त किताबै तयार पारेछ।'
सुशिलजीको उपलब्धीबारे थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो! आउँदो दिनका लागि शुभकामना!
बधाई छ र तपाईंले सबै नेपालीलाई गौरववान्वित बनाउनु भएको छ!
यो नेपालीको लागि गौरवको विषय हो। बधाई छ सुशिललाई। अब पढाइ सकेर अमेरिकामा होइन नेपालमा काम गर्नु पर्यो।
बधाई छ। यसलाई निरन्तरता दिनुस्। राम्रो कुरामा हाम्रो देशको नाम राख्नुस्।
राम्रो काम। अगाडि बढ्नुस्।
तिमी देशको सान हौ। सलाम तिमीलाई। आगामी दिनहरुमा पनि सफलताको लागि शुभकामना।
buddha bdr udas
धन्यवाद र बधाई। तिमीले नेपाल र नेपाली पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश तिम्रो कलेज र संसारभरी नै प्रमाणीत गरिदियौ।
सलाम छ तिमीलाई!
नवीन बहादुर श्रेष्ठ
हार्दिक बधाई र अझै प्रगतिको शुभकामना छ है शुशीलजीलाई .......!
तिम्रो ठूलो उपलब्धीको लागि तिमीलाई बधाई! हामीलाई तिमीमाथि गर्व छ! आफ्नो देशलाई नभुल।
नेपालीहरु पनि कोहीभन्दा कम छैनन्। अवसर पाए संसार जित्ने क्षमता छ नेपालीमा।
धन्यवाद! देशको नाम उच्च राख्न मद्धत गर्छ यस्तो ठूलो कामले!
धन्यवाद! राम्रो काम। कृपया अगाडी बढ्नु। हामीलाई तिमीमाथि गर्व छ।
ल धेरै बधाई छ!
मौका पाए नेपालीले गरेर देखाउँछन् भनेको यही हो। बधाई छ!
नेपालीले जित्ने तरिका यो हो!
धेरै खुसी लाग्यो यस्तो समाचार पढ्न पाएर! सँधै अर्थहिन राजनीतिक समाचारले दिक्क पारेको बेलामा यौटा खुसीको कुरा पढ्न पाइयो!
राम्रो काम! हामीलाई तिमीमाथि गर्व छ। यसलाई निरन्तरता देऊ! शुभकामना!
विश्वकै चम्किलो तारा बन!
बधाई छ सुशीललाई! तर समाचार अपुरो भएन र? यति ठुलो गौरवको विषय बनाइएको सुशीलको अवार्डलाई शुशीलसँगको सामान्य टेलिफोन बार्तमा सिमित नगरेर अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र? अवार्ड दिने विश्वविद्यालयको निकायलाई सम्पर्क गरेर केका लागि, कस्तो प्रक्रियाबाट चुनिएर अवार्ड पाएका हुन् प्रमाणित गर्नुपर्ने होइनन र?
नेपाली विद्यार्थीले पनि अवसर पाएको खण्डमा हरेक चुनौतीको सामना गर्दै प्रशंसनिय नतिजा निकाल्न सक्छन् भन्ने कुराको पुष्टी सुशिलले गरिदिएका छन्। धेरै धेरै बधाई छ सुशिललाई आफ्नो र देशको नाम उचा राखेकोमा।
राम्रो। यस्तो कामको लागि अझै शुभकामना दिन्छु। धवलागिरी र नेपाललाई कहिल्यै नभुल्नु है त।
सफलताको लागि बधाई। तिम्रो अवार्डले नेपालीको गौरवको प्रतिनिधित्व गरेको छ।
राम्रा विद्यार्थी त विदेशमा अवार्ड पाउँछन् अनि विदेशमै बस्छन् नि! यो कुनै अनौठो कुरो भएन क्यारे तर विदेशमा सिकेका कुराहरु देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण कहिलेसम्म बन्ने हो तिनै नेताहरुलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ।
Dil Kamal Chhetri
धन्यवाद! राम्रो काम! हामीलाई तिमीमाथि गर्व छ!
राम्रो काम! हामीलाई तिमीमाथि गर्व छ। यसलाई निरन्तरता देऊ!
Krishna Basnet, Dang
यो नेपालीहरुको निम्ति उत्साहजनक समाचार हो!
Narayan Babu Thapa
Sushil I read this article so late because of my travel and newly arrangement in Haiti .Many many congratulaton on your achievement and success which is the glory for us and Iam proud of you.
we areaproud of you bro.
congratulation and best of luck to more then it.it is the godwwil of nepali and nepal
तिमीप्रित गर्व गर्छौं हामी।